Nnụnụ Eye Sweetcorn 690G | Nzipu ohia otu ubochi - Lewisham Nnụnụ Anya Sweetcorn 690G– Ordrs
Nnụnụ Anya Sweetcorn 690G
Nwee Supersweet Sweetcorn dị ka akụkụ nke nri dịgasị iche na nke kwesịrị ekwesị na ndụ ndụ siri ike
Maka nleta ọzọ bridseye.co.uk
Supersweet Sweetcorn anyị bụ isi iyi nke eriri nke dị mma maka nri ahụike yana yana isi iyi nke folic acid nke dị ukwuu maka sistemu mgbochi gị *. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị sweetcorn na-ẹmende na oyi kpọnwụrụ n'ime awa maka nke zuru okè uto na-ejigide nri.
* Folic acid na-eso eme ka usoro ahụ ji arụ ọrụ nke ọma
Otu nri 80g nke Nnụnụ Anya Supersweet Sweetcorn na-enye otu n'ime akụkụ 5 gị na-atụ aro kwa ụbọchị nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri.
Ruo Mgbe Ebighị Ebi Ọnụ
Anyị nwere obi ụtọ maka mmemme nkwado anyị iji nye gị nri dị ụtọ ma na-edozi ahụ nke na-enyefe ma na-edozi ya - ruo mgbe ebighi ebi.
Isi iyi nke eriri
1 nke 5 otu ụbọchị servings
Enweghị agba agba, ihe ụtọ ma ọ bụ ihe nchekwa
Ngwugwu ngwugwu: 690g
Folic acid na-eso eme ka arụ ọrụ sistem na-arụ nke ọma